Wiricheya Kukwidza Legrest universal uye OEM | KarmanHealthcare.com
musha / Wiricheya Kudzosera Zvikamu / Wiricheya Kukwidziridza Gumbo
Achiratidza zvose 6 zvawanikwa
Kusarudza iyo chaiyo mhando ye wiricheya gumbo zororo, inozivikanwawo se wheelchair gumbo rutsigiro, chisarudzo chakakosha kwazvo. Muchokwadi, kana iwe usina rudzi rwakakodzera rwekuzorora gumbo saka unogona kusangana nekusagadzikana, kuwedzera kuzvimba uye kunyanyisa kuwedzera kwehutano hwako. Saka kuzviita zvakanaka kwakakosha.
Zvakawanda zvinoonekwa zvinoitika pano, uye zvakakosha kuti iwe uve neruzivo zvizere kana zvasvika pamhando dziripo uye mabhenefiti avanopa. Unoda rutsigiro rwakakodzera kwetsoka negumbo paunenge uchishandisa wheelchair. Kana iwe usina iyi nhanho yekutsigirwa, unogona kusangana nematambudziko akadai sekurwadziwa kumashure uye kumanikidzwa mumaburi, izvo zvinogona kureva kusagadzikana kukuru.
Iko kune kazhinji mhando mbiri dzewiricheya inosimudza makumbo emakumbo
Pane mhando mbiri dzewiricheya dzinosimudza zvigaro zvemakumbo: inotsanangurwa uye yakasimudzwa gumbo zororo.
Basa hombe rekutsigira gumbo kungave kukwidziridza kana kutaura, ndiko kuisazve mushandisi yekuparadzira iyo yekuremerwa mutoro uye kubatsira kuwedzera kutenderera kudzivirira kuzvimba. Mhando mbiri idzi dzinowanikwa pane akasiyana mawiricheya (zviyero zvakajairika pakutsenhama nekurerekera mawiricheya), asi ivo vanopa chiitiko chakasiyana.
Chero zvazvingaitika, ramba uchifunga kuti kona iyo zororo regumbo rakasungirirwa pawiricheya (kazhinji 70, 80 kana 90 degrees), inogona kukanganisa nzvimbo yepelvic uye inogona kukanganisa nzvimbo yako yekugara muwiricheya. Zvakare, iyo kona inokanganisa mafambiro ako munzvimbo dzakavharwa, kureva kutenderedza madenderedzwa ewiricheya nekukomberedza imba. Iwe unogona zvakare kuve nemagetsi ekuzorora emakumbo uye nemaoko ekushandisa gumbo zororo. Nepo iyo sarudzo ichiita senge inodzvinyirira, mamiriro ako ekurapa anogona kuona kuti ndeipi gumbo zororo sarudzo yaunotora.